Tiradii ugu badneyd oo maalin qura u dhimatay cudurka Corona |
Tiradii ugu badneyd oo maalin qura u dhimatay cudurka Corona
Dad gaaraya 242 qof ayaa maalintii kahor ugu dhintay xanuunka Corona gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, taas oo ka dhigan tiradii ugu badneyd oo maalin qura cudurka Corona ugu dhimatay dalkaas.
Waxaa sidoo kale sare u kacay tirada dadka uu haleelay xanuunka, waxaana lagu soo warramayaa in la daweeyay ku dhawaad 15 kun oo qof. Gobolkan ayaa bilaabay qaab cusub oo lagu la tacaalayo xanuunka, taas oo bannaanka soo dhigtay kiisas badan oo haatan la ogaaday.
Waxaa maalmihii u dambeeyay raja laga muujinayay wax ka qabashada xanuunka, balse kiisaska cusub ee hataan la ogaaday ayaa sii murjiyay xaaladda gobolka Hubei.
Gobolkan aya waxaa ku sugan boqolkiiba sideetan dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dalka Shiinaha, maadaama uu markiisi hore ka dilaacay Magaalada Wuhan ee isla gobolkaas.
Qaar kamid ah 242 qof ee u dhintay xanuunka ayaa 135 kamid ah waxay ahaayeen dad laga daweynayay xanuunka oo xaaladooda lala tacaalayay.
Dhanka kale Markab ay saaran yihiin laba kun oo qof ayaa gaaray dalka Cambodia, kadib markii laga soo eryay shan dal, kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka saaran ay qabaan xanuunka Corona.
Inkastoo aanan la xaqiijinin in dadka markabka saaran ay qabaan xanuunka ayaa haddana markabkan oo lagu magacaabo MS Westerdam waxaa uu dalkaas tegay maanta oo khamiis ah, kadib markii dalalka Japan, Taiwan, Guam, Philippines iyo Thailand ay diideen in dadkaas ay kasoo degan markabka oo ay soo galaan dalalkooda.
“Waxaan u heysanay in aan usoo dhawaanay dalalkeena balse uma aanan heysan in nala soo eryayo,” ayuu yiri Angela Jones oo u dhashay dalka Mareykanka, kana mid ah dadka saaran markabka.
Haseyeeshee go’aanka Dowladda Cambodia ay kusoo dhaweysay markabkaas ayaa waxaa soo dhaweeyay hey’adda caafimmaadka adduunka ee WHO.
Dhawaan ay ahayd markii Dowladda Shiinaha ay shaqada ka eriday mas’uuliyiin sarsare, kadib markii ay sheegtay inay ku guuldareysteen wax ka qabashada caabuqa Corona ee ka dilaacay dalkaasi.
Xanuunkan oo ay u dhinteen dad gaaraya kun qof ayaa mas’uuliyiinta shaqada ku waayay waxay kala yihiin xoghayaha xisbiga talada haya u qaabilsan guddiga caafimaadka ee Hubei iyo gudoomiyaha guddigaasi.
Mas’uuliyiintan ayaa noqday kuwii ugu sarreeyay ee shaqada guddiga caafimaadka laga eryo, waxaana sidoo kale shaqadiisi waayay agaasime ku xigeenka hay’adda laanqeeyrta cas ee dalka Shiinaha.
Mas’uuliyiinta shaqada laga eryay ayaa la sheegay in lagu bedali doona kuwo kale oo heer qaran ah.
Maalma kahor ayay ahayd markii 103 qof ay xanuunka Corona ugu dhinteen gobolka Hubei, waxaana guud ahaan dadka xanuunkan u dhintay ay gaarayaan 1,016 qof.
Sida ay ku soo warrantay warbaahinta dalkaas, waxaa jira boqolaal qof oo kale oo shaqada laga eryay, waxaana socda baaritaanno ku aadan sida loola tacaalay xanuunka ka dilaacay Shiinaha.
Qaar kamid ah dadkaas ayaa la sheegay in shaqadii ay hayeen laga yareeyay oo aan gebi ahaanba shaqada laga eryin. Waxaa suuragal ah in dadkaasi shaqada la eryay ay sidoo kale ciqaab mutaystaan.
Dadka shaqo ka tirista ay saameysay waxaa kale oo kamid ah madaxa guddiga caafimaadka ee Huanggang oo ah magaalada labaad ee uu sida ba’an u saameeyay cudurka.
Muddooyinkii dambe, mas’uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa lagu dhaleeceeyay wax ka qabasha la’aanta cudurka iyo sida ay ula tacaaleen.
Dad badan oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa ka carooday dhimashada dhakhtar horay uga digay xanuunka Corona, waxaana ay sheegeen in al dhayalsaday digniintii uu bixiyay.
Xukuumadda Beijing ayaa koox baaritaan samaysa u dirtay gobolka Hubei, si ay u baaran qaabka loo daweeyay dhakjtarkaas.
Ninkii Labada Nin Ku Dilay Wadada Ceerigaabo Oo La Soo…